स्वास्थ्य र जीवनशैली Archives - Page2of 24 - Naya Patrika
डा. अबरार मुल्तानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, २ जेठ - मानिसलाई एन्टिबायोटिकको आवश्यकता हुन्छ । एन्टिबायोटिकले रोग फैलने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्ने भएकाले पनि यो हाम्रो शरीरका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एन्टिबायोटिक यस्तो औषधि हो, जसले इन्फेक्सनबाट लाग्ने रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ । एन्टिबायोटिकलाई एन्टिब्याक्टेरियल पनि भन्ने गरिन्छ । यसले ब्याक्टेरियासँग लड्छ र नष्ट गर्ने काम गर्छ । हाम्रो शरीरमा इम्युन सिस्टम हुन्छ, जसले ब्याक्टेरियासँग लड्ने...
डा. सविना श्रेष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ, - धुलो तथा धुवाँका कारण आँखामा समस्या आउँछ । शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग आँखाको हेरचाहमा हामीले निकै ध्यान दिनुपर्छ । सानो गल्तीले आँखामा ठूला समस्या आउन सक्छ । त्यसैले यसको स्याहारमा ध्यान दिनुपर्छ । आँखालाई स्वस्थ नराख्दा आँखा चिलाउने, इन्फेक्सन हुनेजस्ता रोग देखा पर्छन् । आँखामा धुलो परेर समयमा उपचार नगर्दा आँखा फुट्ने, आँखा देख्न बन्द...
राजन बुढाथोकी, जुम्बा इन्स्ट्रक्टर, २ जेठ - नृत्यमा आधारित रहेर गर्ने एक्सरसाइज हो, जुम्बा । शरीरको तौल घटाउन वा फिट रहन जुम्बा गरेर मात्र हुँदैन । यसका लागि डाइट पनि कन्ट्रोल गर्न जरुरी हुन्छ । जुम्बा गर्दा बढी पसिना बग्ने भएकाले पानी पनि अत्यधिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । जुम्बा गरिरहेको समयमा भने बढी पानी पिउने गर्नुहुँदैन । एकपटकमा २ सय ५० एमएलदेखि...
अर्जुन पौडेल/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २ जेठ - शान्ति स्थापनार्थ करिब ९०० नेपाली सेना कंगोमा - पश्चिम अफ्रिकी मुलुक कंगोमा इबोला भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेपालमा सतर्कता अपनाइएको छ । शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेना खटिएको कंगोमा इबोला संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई सतर्क गराएको हो । कंगोमा नेपाली सेनाबाहेक...
स्टिम बाथले स्वस्थ मुटु
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - स्टिम बाथले छालालाई निकै फाइदा पु-याउँछ । तर, यसको फाइदा छालामा मात्र सीमित छैन । यसले त मुटुलाई स्वस्थ बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्थात्, मुटुका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ, स्टिम बाथ । एक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ कि नियमित स्टिम बाथ लिने मानिसलाई स्ट्रोकको खतरा निकै...
यसकारण दुख्छ बच्चाको पेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - बच्चालाई सबैभन्दा बढी सताउने समस्या पेटको दुखाइ हो । सरसफाइ र खानामा राम्ररी ध्यान नदिँदा पेट दुख्ने गर्छ । बालबालिकाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्ने भएकाले यसमा अभिभावकले विशेष ध्यान पु-याउनुपर्छ । तर, बच्चाको पेट दुख्नुको कारण निश्चित नभई औषधि खुवाउने गल्ती गर्नुहुँदैन । यी हुन् बच्चाको पेट दुख्ने कारण...
रिसले हृदयाघात हुन सक्छ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - मानिसलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, बढी रिसाउने बानी भने मानिसका लागि सबैभन्दा बढी घातक साबित हुन्छ । पुरानो उखान छ– ‘रिसले आफैँलाई खान्छ ।’ त्यसैले यो सत्य हो कि रिसले जिन्दगी बर्बाद त पार्छ नै, मृत्युको मुखमा समेत पु-याउन सक्छ । हृदयाघातको एउटा प्रमुख कारण रिस पनि...
‘ग्रिन टी’ पिउनुस् स्वस्थ रहनुस्
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ३१ वैशाख - चिया नेपालीको संस्कार हो । विशेषगरी कालो, दूध र कागती चिया बढी प्रचलनमा छ । अव्यवस्थित पिउँदा दूधचियाले स्वास्थ्यमा असर पनि पार्न सक्छ । तर, चिया अरू पनि हुन्छन् । जस्तो कि ग्रिन टी, पुदिना टी आदि । यहाँ ग्रिन टीबारे चर्चा गरिएको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ...
फेसन ट्रेन्डमा लङ आउटर
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ३१ वैशाख - गर्मी मौसम सुरु भएसँगै लङ आउटर प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ । लङ आउटर महिलाले प्रयोग गर्ने ड्रेस हो । यसले फेसनेबल देखाउनुका साथै छालालाई घामबाट बचाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो आउटर शारीरिक बनावटअनुसार छनोट गरेमा आकर्षक देखिन अझ बढी मद्दत पुग्छ । लङ आउटरको सहायताले मानिसलाई फरकपनाको...
ग्यास्ट्राइटिस भए के खाने ?
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ३१ वैशाख - ग्यास्ट्राइटिसलाई नेपालीको आमसमस्याका रूपमा लिइन्छ । अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानका कारण मानिसमा ग्यास्ट्राइटिस हुने गर्छ । यो पेटको समस्या हो । यसैबाट अनेक रोग जन्मने गर्छ । त्यसैले यसको समयमै उपचार गर्न जरुरी हुन्छ । ग्यास्ट्राइटिस कम गर्न खानाको पनि विशेष भूमिका हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ...
थाहा पाउनुस् कस्तो छ बच्चाको आँखा ?
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ३१ वैशाख - आँखा मानिसको संवेदनशील अंग हो । वयस्क र वृद्धहरूमा मात्र होइन, बालबालिकामा पनि आँखासम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन्छन् । बालबालिकाको आँखाबारे अभिभावक सचेत हुन आवश्यक छ । किनकि, बालबालिकाले आफूमा भएको समस्या भन्न सक्दैनन् । बालबालिका निकै चकचके हुने भएकाले पनि यसबारे विशेष ध्यान दिनुपर्छ । र, आँखामा हुने स–साना समस्याबारे...
आङ खस्नुका कारण र लक्षण
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - महिलाको सानो पेटमा रहेका अंगहरू सामान्य अवस्थाबाट ठाउँ छाडेर योनिमा झर्नुलाई आङ खस्नु भनिन्छ । आङ खस्ने समस्याबाट नेपालमा पनि धेरै महिला पीडित छन् । अस्पतालमा आङ खस्ने समस्या लिएर दैनिक धेरै संख्यामा महिलाहरू पुग्ने गरेको पाइन्छ । कारण सधैँजसो गह्रौँ भारी बोक्नु । असुरक्षित गर्भपतन गराउनु । वंशानुगत ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - अम्बा अत्यन्त स्वादिलो फल हो । यसमा आयुर्वेदिक औषधीय गुण पनि हुन्छ । फल मात्र नभएर यसको पात पनि औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । अम्बामा प्रशस्त मात्रामा आइरन र हेमोग्लोबिन पाइन्छ । काँचो र पाकेको दुवै अवस्थाको अम्बा स्वस्थकर हुन्छ । आधा पाकेको अम्बाले पेटसम्बन्धी रोगका लागि फाइदा पु-याउँछ ।...
यी रोगबाट बच्न त्याग्नुस् मदिरा
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - कतिपय खराब कुरालाई पनि हामीले जीवनको अंग बनाएका हुन्छौँ । जुन बानीले शरीरमा गम्भीर रोग नै निम्त्याउन सक्छ । शरीरलाई असर पार्ने त्यस्तै एउटा बानी हो, नियमित मदिरा सेवन । नियमित मदिरा सेवनले शरीरमा पार्ने गम्भीर समस्या यस्ता छन् : मुखको क्यान्सर धेरैले मदिराको असर कलेजोमा मात्र पर्न जान्छ भन्ने...
बढी पानीले ‘हाइपोनट्रेमिया’
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त पानी आवश्यक पर्छ । गर्मी होस् वा जाडो मौसम नै किन नहोस्, पानी मानिसका लागि अति आवश्यक छ । तर, पानीको मात्रा भने मिलाउन जरुरी हुन्छ । बढी वा कम पानीले शरीरमा गम्भीर समस्यासमेत निम्त्याउन सक्छ । बढी पानीले ‘हाइपोनट्रेमिया’ आवश्यकभन्दा बढी पानी पिउँदा ‘हाइपोनट्रेमिया’ रोग लाग्ने...
बच्चालाई पखाला लागे के खुवाउने
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - गर्मी मौसममा बालबालिका झाडापखालाको जोखिममा हुन्छन् । जसले, बालबालिकालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन समयमै उपचार नभए ज्यानै लिन सक्छ । त्यसैले यस्तो मौसममा बच्चालाई झाडापखालाबाट बचाउन अभिभावकले विषेश ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट बच्न खानाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसबारे सचेत हुनुपर्छ : सामान्यतया आमाको दूध खाने बच्चालाई कुनै रोग...
स्थानीय सरकारले खरिद गर्न थाले औषधि
जितेन्द्र खड्गा/नयाँ पत्रिका, सप्तरी, ३० वैशाख - सप्तरीका स्थानीय तहले आफैँ औषधि खरिद गर्न थालेका छन् । केहीले खरिद गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबैका लागि औषधि खरिद गर्दै आएको थियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहले औषधि खरिदको प्रक्रिया थालिसकेका छन् । राजविराज, हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाले भने आवश्यक औषधि खरिद...
नर्स बन्न खर्च आठ लाख, मासिक तलब १० हजार
अर्जुन अधिकारी/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २९ वैशाख - अाज विश्व नर्सिङ दिवस - विश्व नर्सिङ दिवस शनिबार संसारभरि मनाइँदै छ । नर्सिङ सेवाको सुरुआत गर्ने फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जन्मदिनमा मनाइने नर्सिङ दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ । यस वर्ष नर्सिङ दिवसको नारा ‘स्वास्थ्य एक मानवअधिकार’ भन्ने छ । अस्पताललाई सफा राख्न र बिरामीको सम्मान तथा भावनालाई कदर गर्न नाइटिंगेल...
पुरानो टुथब्रसको फरक उपयोग
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २८ चैत - टुथब्रस दाँत सफा गर्न दैनिक हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ । निरन्तर प्रयोग गर्दा एउटा टुथब्रस सामान्यतया करिब तीन महिना उपयोग गरिन्छ । त्यसपछि टुथब्रस बिग्रन थाल्ने कारण यसले राम्रोसँग दाँत सफा गर्न पनि सक्दैन । यस्तोमा दाँत सफा गर्न अर्को टुथब्रस लिनुको विकल्प पनि हुँदैन । नयाँ टुथब्रस खरिद...
कडा परिश्रम गर्ने महिलामा देखिन सक्छ यस्ता समस्या
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २८ चैत - पछिल्लो समय शारीरिक व्यायाम कम भएर धेरै रोग लागेका खबर पढिरहेका हुन्छौँ । तर, कडा र धेरै परिश्रम गर्ने महिलामा पनि धेरै स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने गर्दछन् । खासगरी, किक–बक्सिङलगायतका मार्सल आर्टस् खेल्ने, साइकल चलाउने, धेरै भार उठाउनेलगायतका कडा श्रम आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा खटिने महिलामा समस्या देखा पर्ने गर्दछ ।...
गरिबलाई दिने उपचार कोषको पैसा चार महिनामै सकियो
अर्जुन अधिकारी/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २८ वैशाख - सरकारले गरिब तथा निमुखा जनताको औषधोपचारका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम चार महिनामै सकेको छ । रकम अभावमा उपचार सहायता सेवा नै बन्द हुने तयारीमा पुगेको छ । सरकारले गम्भीर आठ प्रकारका रोग लागेका गरिबलाई ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मार्फत सहयोग दिँदै आएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोषका लागि आउने पैसा...
बागलुङ कारागारका कैदीको क्षयरोग परीक्षण
नारायण रिजाल, बागलुङ, २७ वैशाख - बागलुङ कारागारका कैदीलाई लक्षित गरी बिहिबार क्षयरोग परिक्षण शिविर सम्पन्न गरिएको छ । शिविरमा कारागारका ७३ पुरुष र ६ महिला गरी ७९ कैदीको क्षयरोग परीक्षण गरिएको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम अन्तर्गतबागलुङ नगरपालिकाको आयोजना साथै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । कारगार...
खुसी हुने जापानी काइदा, किन्टसुगी वेलनेसबाट ७ टिप्स
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २७ वैशाख - आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘किन्टसुगी वेलनेस’ विमोचन गरेपछि क्यान्डिस कुमाई चर्चामा छिन् । पोलिस बाबु र जापानी आमाकी सन्तान क्यान्डिस पेसाले सेफ हुन् । यसअघि उनले कुकिङसम्बन्धी पुस्तकहरू लेख्ने गरेकी थिइन् । तर, यो पुस्तक भिन्न छ । यस पुस्तकमा उनले कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने विषय समेटेकी छिन् । यस...
लामो कपाल, सुन्दर बनाउने ५ उपाय
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २७ वैशाख - चिसोमै कोर्ने लामो कपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जेलिइरहनु हो । जेलिएर लट्टा परेपछि लामो कपाल भएकाहरू हैरान हुनुपर्छ । नुहाएर सुकेपछि लामो कपाल अल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले नुहाउँदा नै कोर्नुपर्छ । स्याम्पु र कन्डिसनर प्रयोग गरिसकेपछि मोटो दाँत भएको काँइयोले कोरेर अल्झिएका कपाल फुकाउनुपर्छ । यसो गर्दा...
शिक्षकको भूमिका कस्तोे हुनुपर्छ ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २७ वैशाख - विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बच्चाले धेरैजसो समय स्कुलमा बिताउने गर्दछन् । बच्चाका बारेमा शिक्षकले धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्कुलमा शिक्षकहरूले विद्यार्थीको बानी व्यवहार, खानपान, पढाइ, शारीरिक क्रियाकलाप सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा कक्षाकोठामा धेरै बच्चा हुन्छन् । एउटा कक्षाकोठामा...
स्वास्थ्यचौकीमा अति आवश्यक औषधि अभाव
विश्वराज पछल्डङ्ग्या/नयाँ पत्रिका, बाँके, २७ वैशाख - राप्ती–सोनारी गाउँपालिका–७, सर्रामा रहेको स्वास्थ्यचौकी भवनमा सरकारले प्रदान गर्ने २८ थरीका औषधिको विवरणको सूची राखिएको छ । त्यही सूचीका आधारमा सर्वसाधारण उपचारका लागि आउने गर्छन् । तर, स्वास्थ्यचौकीमा १४–१५ थरी औषधि मात्र उपलब्ध छ । त्यसमा पनि अति आवश्यक थोरै र कम आवश्यक औषधि धेरै छन् । सूचीमा भएका औषधि...
सुरक्षा र स्टाइलका लागि स्कार्फ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २७ वैशाख - मौसमअनुसार फेसन पनि परिवर्तन हुन्छ । तर फेसनेबल देखिन चाहनेलाई मौसमले रोक्न सक्दैन । चिसो मौसममा मफलर प्रयोग गरेर स्टाइलिस देखिने महिलाहरूले गर्मीमा स्कार्फ लगाउन सक्छन् । आफ्नो टाउको, अनुहार, कपालको सुरक्षा गर्न पनि स्कार्फले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । समरमा कस्ता स्कार्फ लगाउँदा राम्रो हुन्छ त ? समर...
जनशक्तिको अभाव झेल्दै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
गोविन्द सुवेदी, पोखरा, २६ वैशाख - प्रदेश नम्बर ४ मा सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गराउने सबै भन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनशक्तिको अभाव झेलेको छ । प्रतिष्ठानमा बाल सल्यक्रियाका लागि डाक्टर नभएको लामो समय भइसक्यो । एकजना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भएपनि काजमा राजधानीमै लैदिँदा अस्पतालले अभाव झेलिरहेको छ । जनरल सर्जरी डाक्टरले बालरोग विशेषज्ञ...
हृदयाघातका लक्षण र बच्ने उपाय
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २६ वैशाख - हृदयाघात मानिसलाई लाग्ने मुटुसम्बन्धी रोगमध्ये सबैभन्दा खतरनाक हो । कुनै पनि समयमा यो रोगले आक्रमण गर्न सक्ने हुनाले सम्भावित व्यक्ति या आफन्तले विशेष सजगता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । विश्वमा हुने मानव मृत्युमध्ये २५ देखि ३५ प्रतिशतको कारण हृदयाघात रहेको पाइन्छ । यो रोगका लक्षण र यसबाट बच्न अपनाउन सकिने उपाय...
भाइरल ज्वराेबाट कसरी बच्ने ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २६ वैशाख - मौसम परिवर्तन हुने क्रममा भाइरलका कीटाणु सक्रिय हुने गर्दछन् । जसका कारण भाइरलका बिरामी धेरै भेटिन्छन् । भाइरल ज्वरोका लक्षण ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, चिलाउने, शरीर दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, अत्यधिक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरका जोर्नी दुख्ने, थकाइ लाग्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, जाडो हुने, खोकी लाग्ने, नाकबाट...
कर्मचारीलाई मानसिक रूपमा सबल बनाउन के गर्ने ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २६ वैशाख - कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ हुनुपर्छ । मानसिक अवस्था सबल भएन भने काममा ह्रास आउँछ र आर्थिक रूपमा पनि घाटा पुग्न सक्छ । त्यसैले अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघका अनुसार कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने पाँचजनामध्ये...
अाेठ सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २६ वैशाख - उमेर तथा अन्य विविध कारणले कहिलेकाहीँ ओठको रङ परिवर्तन हुन सक्छ । मानिसहरु आफ्नो ओठमा प्राकृतिक रंग फर्काउन विभिन्न कस्मेटिक सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, केही त्यस्ता उपाय पनि छन्, जसले तपाईको प्राकृतिक चमकलाई ओठमा फर्काउन सक्छ । ओठ कालो हुने कारण अनियमित खानपान, अस्तव्यस्त जीवनशैली र धुम्रपानको असर ओठमा...